MB 2018 Desambra - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2018 Desambra
Ity taratasy ity no taratasiko farany isam-bolana amin'ny maha mpiasa anao ao amin'ny GCI satria miala sasatra amin'ity volana ity aho. Rehefa misaintsaina ny naha-filohan'ny antokom-pinoana ahy aho dia fitahiana maro no tonga tato an-tsaiko izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny iray amin'ireo fitahiana ireo dia misy ifandraisany amin'ny anarantsika - "Grace Communion International". Heveriko fa mamaritra amin'ny fomba tsara tarehy ny fiovantsika lalina amin'ny maha-vondrom-piarahamonina anay. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga vondrom-pinoana (fiombonambe) mifototra amin'ny fahasoavana isika izay mandray anjara amin'ny fiombonan'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Tsy nisalasala mihitsy aho fa ny Andriamanitra telo izay iray dia nitondra antsika ho amin'ny fitahiana lehibe tao anatin'ity fanovana mahafinaritra ity. Ry mpikambana malalako, namako ary mpiasan'ny GCI / WKG, misaotra anao tamin'ny fahatokisanao tamin'ity dia ity. Porofom-piainana velona ny fiainanao.
Ny tso-drano iray hafa dia tonga ao an-tsaina dia ny iray izay mety ho taterin'ny mpikambana atoandro efa ela. Nandritra ny taona maro dia nivavaka matetika teo am-panompoana isika mba hanehoan'Andriamanitra bebe kokoa amintsika ny fahamarinany. Ren'Andriamanitra izany vavaka izany - tamin'ny fomba tena manaitra! Nanokatra ny fontsika sy ny saintsika Izy mba hahatakarantsika ny halalin'ny fitiavany ny zanak'olombelona rehetra. Nasehony antsika fa miaraka amintsika foana Izy ary ny hoaviny mandrakizay dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fahasoavany.
Betsaka no nilaza tamiko fa tsy nandre toriteny momba ny fahasoavana tao amin'ny fiangonantsika nandritra ny taona maro. Misaotra an 'Andriamanitra aho fa tamin'ny 1995 dia nanomboka nandresy ity tsy fahampiana ity izahay. Mampalahelo fa nisy mpikambana sasany naneho ny heviny ratsy tamin'ny fanamafisantsika vaovao ny fahasoavan'Andriamanitra ary nanontany izy ireo hoe: "Inona daholo izany resaka nataon'i Jesosy izany?" Ny valintenintsika tamin'izany (toy ny ankehitriny) dia toy izao manaraka izao: "Mitory ny vaovao tsara momba Ilay nahary antsika isika, izay tonga ho antsika, izay maty sy nitsangana hamonjy antsika ary namonjy antsika!"
Araka ny Baiboly, Jesosy Kristy, Tompontsika nitsangana tamin’ny maty, dia any an-danitra ankehitriny amin’ny maha-Mpisoronabe antsika miandry ny fiverenany amim-boninahitra. Araka ny nampanantenaina, dia manomana toerana ho antsika izy. «Aza matahotra ny fonao! Minoa an'Andriamanitra ary minoa Ahy! Misy trano be dia be ao an-tranon'ny raiko. Raha tsy izany, dia ho nilaza taminareo va Aho hoe: Handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho? Ary rehefa handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako koa ianareo. Ary izay alehako dia ho fantatrareo ny lalana » (Jaona 14,1-4). Io toerana io dia fanomezana ny fiainana mandrakizay miaraka amin’Andriamanitra, fanomezana azo tanterahina amin’izay rehetra nataon’i Jesosy sy hataony. Ny toetran’io fanomezana io dia nambara tamin’i Paoly tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina: “Fa milaza ny fahendren’Andriamanitra isika, izay miafina ao amin’ny zava-miafina, izay notendren’Andriamanitra rahateo ho voninahitsika hatry ny fony fahagola, izay tsy nisy fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao. ; fa raha nahalala azy izy, dia tsy nohomboany tamin'ny hazo fijaliana ny Tompon'ny voninahitra. Miresaka araka ny voasoratra isika (Isaia 64,3): “Izay tsy mbola hitan’ny maso, tsy mbola ren’ny sofina, ary izay namboarin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy, sy izay tsy tafiditra ao am-pon’olombelona.” Fa ny Fanahy no nanambaran’Andriamanitra izany tamintsika; fa ny fanahy mandinika ny zavatra rehetra, anisan’izany ny halalin’Andriamanitra » (1. Korintiana 2,7-10). Misaotra an’Andriamanitra aho fa naneho amintsika ny tsiambaratelon’ny fanavotana antsika ao amin’i Jesosy – fanavotana azo antoka amin’ny alalan’ny fahaterahana, ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganana amin’ny maty, ny fiakarana any an-danitra ary ny fiverenan’ny Tompo nampanantenaina. Izany rehetra izany dia amin’ny alalan’ny fahasoavana – ny fahasoavan’Andriamanitra nomena antsika tao amin’i Jesosy sy tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina.
Na dia hijanona tsy ho ela aza ny asako amin'ny GCI, dia nifandray tamin'ny fiarahamoninay foana aho. Hanohy hiasa amin'ny birao GCI any Etazonia sy UK ary amin'ny birao Seminera ho an'ny Komisiona Grace (GCS) aho, ary hitory ao amin'ny fiangonako. Nanontany ahy ny pastera Bermie Dizon raha afaka manome toriteny isam-bolana aho. Niara-nihomehy taminy aho fa tsy toy ny fisotroan-dronono ireo asa rehetra ireo. Araka ny fantatsika, ny asa fanompoana ataontsika dia tsy asa mahazatra - antso, fomba fiainana izany. Raha mbola manome hery ahy Andriamanitra, dia tsy hitsahatra amin'ny fanompoana ny hafa amin'ny anaran'ny Tompontsika aho.
Rehefa manao jery todika ireo taona vitsivitsy lasa izay dia tsaroako tsara ny GCI ary koa ny fitahiana maro izay misy amin'ny fianakaviako. Izahay sy Tammy dia voatahy mahita ny zanakay roa lehibe, lehibe avy any amin'ny oniversite, mahita asa tsara ary manambady sambatra. Ny fankalazantsika an'ireto milahatra ireto dia be loatra ka tsy nampoizinay ny hahatongavana amin'izy ireo. Araka ny efa fantatry ny maro aminareo dia nampianatra ny vondrom-piarahamoninay teo aloha fa tsy hisy fotoana ho an'ny zavatra toy izany - hiverina tsy ho ela i Jesosy ary hitondra any amin'ny "toerana fiarovana" isika any Atsinanana alohan'ny fiaviany fanindroany. Soa ihany, dia nanana drafitra hafa Andriamanitra, na dia misy toerana iray azo hiomanana ho antsika rehetra - ny Fanjakany Mandrakizay.
Rehefa nanomboka nanompo tamin’ny naha-filohan’ny antokom-pivavahantsika aho tamin’ny 1995, dia ny nampahatsiahy ny olona fa i Jesoa Kristy no loha laharana amin’ny zava-drehetra: “Izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana. Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho voalohany amin’ny zavatra rehetra Izy » (Kolosiana 1,18). Na dia efa misotro ronono aza aho amin'ny maha-filohan'ny GCI ahy rehefa afaka 23 taona mahery, dia mbola ary mbola hitohy hatrany ny fifantohako. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hitsahatra hanondro ny olona amin'i Jesosy aho! Velona Izy, ary satria velona Izy, dia velona koa isika.